Posted by sannmaw | 02/06/2011, 15:48
It hits my heart. 😦
Posted by heartmuseum | 03/06/2011, 02:03
Posted by K | 03/06/2011, 04:11
အထဲနေတဲ့လူကလည်း အပြင်ကလူ မိုးကျရျွှေကိုယ် လာလုပ်မှာကို လက်မခံချင်တာ နားလည်လို့ ရပါတယ်။ ဒါဗမာပြည်ရယ်မှ မဟုတ်ဖူး။ လူမျိုးတိုင်းမှာရှိတယ်။ လူ့စိတ်လို့ပဲ ခေါ်ရလေမလား။ အပြင်က လူကလည်း သူ့ အတွေ့အကြုံနဲ့သူ တကယ့်ကို စိတ်ရင်း စေတနာ အမှန်နဲ့ နည်းပေးလမ်းပြ လုပ်ချင်တယ်။ စိတ်ရင်းစေတနာ မပါသူတွေလည်း ရှိနိုင်တာပဲ။ သူ့အတွေ့အကြုံနဲ့ သူ့မှာ ပြောပြပိုင်ခွင့် ရှိတယ်လို့ သဘောထားမှာ သဘာဝကျတယ်။ အဲဒိဆန္ဒနှစ်ခုကြားမှာ သင့်တော်တဲ့ balance တခုခု ရအောင် ရှာနိုင်ဖို့က အရေးကြီးတယ်။ ပြောရတာသာ လွယ်တာပါ။ တကယ်တမ်းကျတော့ ပြောသလောက်မလွယ်ဘူး။
Posted by watote | 03/06/2011, 07:34
အစ်ကိုတို့ အစ်မတို့ …. မမြင်ရဘူးဗျ .. ဘာဖောင့်နဲ့ရေးတာလဲမသိဘူး ။ ဇော်ဂျီနဲ့ပဲရေးပါလားဗျာ။ အကြံဥာဏ်ပေးကြည့်တာပါ။ မြန်မာ၃ နဲ့ ဇော်ဂျီနဲ့က တစ်ခုတင်ရင် တစ်ခုကမမြင်ရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းကိုမသိတာ။ ဘာပဲပြောပြော ရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးမှန်သမျှ အကုန်ကြိုက်တယ်ဗျ။
Posted by michal | 03/06/2011, 09:35
we use either zawgyi or myanmar 3, michal.
Posted by zizawa | 04/06/2011, 01:13
ဟုတ်တယ်၊ ကျွန်တော့်ဆီကလည်း မမြင်ရဘူး၊ မှန်ထဲမှာပြောင်းပြန်မြင်ရသလိုဖြစ်နေတယ်
Posted by myp | 23/06/2011, 17:16